Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dowlada federaalka Soomaaliya oo dib uga bilaabmatay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDoorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dowlada federaalka Soomaaliya oo dib uga bilaabmatay Garoowe
November 23, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Xubin kamid ah xubnaha ergooyinka soo doortay xildhibanaada. [Xuquuqda Sawirka: Sahan Online]
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada xubnaha aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah dib uga bilaabmatay magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland.
Doorashada maanta ayaa waxaa lagu dooran doonaa saddex xildhibaan, kuwaasoo kamid ah 37-da xildhibaan ee Puntland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya. 19 xildhibaan ayaa horey loo soo dortay.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer Puntland nabadoon Khaliif Aw-Cali oo shir jaraa’id ku qabtay caasimada Puntland shalay oo Talaado ahayd ayaa sheegay in caqabado dhanka dhaqalaaha ay haysato guddiga, taasoo uu sheegay in ay hakad gelisay hab u socodka doorashada aqalka hoose ee Garoowe ka socda.
November 3, 2016 Haayada World Vision oo Kulan looga hadlayay dib u eegida siyaasadda ganacsiga yar yar ee heer gobol ku qabatay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Xafiiska Hanti-dhawrka Puntland ayaa hakiyay dhammaan akoomada Wasaaraddaha Puntland ay ku leeyihiin bangiyada gaarka loo leeyahay ee kuyaala gudaha Puntland. Sida ay sheegayso waraaq uu helay warsidaha Puntland Mirror, Guddoomiyaha Xafiiska Hanti-dhawrka Puntland Jaamac [...]